कसरी निकाल्ने स्टार्टअप आइडिया र नाफामूलक बनाउने ? ध्यान दिनुपर्छ यी १० स्टेप « Clickmandu
कसरी निकाल्ने स्टार्टअप आइडिया र नाफामूलक बनाउने ? ध्यान दिनुपर्छ यी १० स्टेप
प्रकाशित मिति : २७ पुष २०७८, मंगलवार ०६:५०
काठमाडौं । जब कसैले स्टार्टअप आइडिया निकाल्छ र सफल हुन्छ, उसले पैसामात्रै कमाउँदैन । उसले सबैको हाईहाई पाउँछ, मिडियामा चर्चा हुन्छ । र, युवापुस्ताका लागि ‘आइडल’ पनि बन्नसक्छ ।
हाम्रै भूगोलभित्र यस्ता धेरै उदाहरण छन् । ईसेवा, फुडमाण्डू, खल्ती, युजी केक…लामै सूची बन्छ । जसले स्टार्टअपबाट शुरु भएर व्यवसायीकरुपमा सफल भएका छन् ।
त्यसो हो भने मुलुकभित्रकै यी उदाहरण जस्तै: स्टार्टअपकाको नयाँ आइडिया कसरी ल्याउने र त्यसलाई सफल कसरी बनाउने त ?
हामी यही प्रश्न बोकेर स्टार्टअप विज्ञकारुपमा परिचित रञ्जितराज आचार्यकहाँ पुगेका छौं । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको ‘स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन कमिटि’का सभापति पनि हुन् ।
उनीसँग सफल स्टार्टअप र असफल स्टार्टअपका अनुभव छन् । त्यत्तिमात्र होइन, नेपालमा यस क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने इतिहासदेखि युवापुस्तालाई ‘मोटिभेसनल स्पिच’ समेत दिन्छन् ।
मोटिभेसनकै लागि सबैभन्दा पहिले चाहिने भनेको आत्मविश्वास हो । जब आफूले केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास बढ्छ, तब आत्मविश्वास बढ्छ । त्यसैले त उनले आफ्नो टेवल देखिने गरी राखेका छन् ‘आइ क्यान डु’ लेखिएको सानो खेलौना ।
कुनै पनि स्टार्टअप गर्न चाहने व्यक्तिमा ‘आइ क्यान डु’ भन्ने आत्मविश्वास अति नै आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि भने विभिन्न चरण पार गरेरमात्र उक्त आत्मविश्वास प्राप्त गर्न सकिने आचार्यको भनाइ छ ।
‘स्टार्टअप आइडिया बनाउनेदेखि त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्य भन्छन् ।
एक स्टार्टअप सफल बनाउन समयको मूल्यांकनदेखि स्टाबलिसमेन्टसम्मका कम्तीमा १० चरणमा काम गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।
स्टार्टअप आइडिया कसरी बनाउने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्दा समय परिवर्तनशिल छ भन्ने मनमा राख्नुपर्छ । समयसँगै बजार र उपभोक्ता पनि परिवर्तनशिल छन् । जब बजार र उपभोक्ताको माग परिवर्तन भइरहन्छ भने त्यसैलाई बुझेर प्रडक्ट, सर्भिस वा कन्सेप्ट पनि परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ । परिवर्तित मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने बजारमा टिक्न सक्दैन र बिलय हुनसक्छ ।
नोकिया र कोडाकलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा आचार्यले पेश गर्छन् । कोडाकले फोटो खिच्ने रिल बनाउँथ्यो । रिल धुलाएर फोटो आउँथ्यो । जब युग डिजिटल प्रविधिमा प्रवेशमा गर्न थाल्यौं, कोडाकले समयअनुसार डिजिटल युगमा परिवर्तन गर्न सकेन ।
नोकियामा पनि यस्तै भयो ।
समयअनुसार परिवर्तन गर्न नखोजेको कारण कोडाक र नोकियालाई समयले नै फालिदियो ।
आवश्यकता र ग्यापको पहिचान
उपभोक्ताको मन परिवर्तन भइरहन्छ । कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गरिरहेका छन् भने केही समयको अन्तरालमा परिवर्तन र नयाँ आवश्यकता महसुस गर्न थाल्छन् । उनीहरु नयाँ टेष्ट खोजिरहेका हुन्छन् ।
‘यो भनेको ‘निड–ग्याप’ हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘त्यही केही नयाँ आवश्यकता सृजना भयो ।’
समय परिवर्तनशिल भएसँगै उपभोक्तामा जब आवश्यकता जन्मन्छ, त्यसलाई सेवा वा वस्तुले परिपूर्ति गर्न सक्दैन । त्यहाँ ग्याप हुन्छ ।
यही निड र ग्याप पत्ता लगाउन सकियो भने स्टार्डअप आइडिया फुर्छ ।
जसले स्टार्टअप गर्न खोजिहेको छ उसले ‘निड र ग्याप’ पत्ता लगाउनु पर्छ । निड ग्याप पत्ता लगाउन सकियो भने मात्र आइडिया बनाउन सकिन्छ ।
आचार्यकै एक उदाहरण हेरौं ।
काठमाडौंमा झन्डै ३८ वटा एफएम स्टेसन छन् । तीमध्ये ३-४ वटा नाफामा छन् । ४-५ वटा ब्रेकइभनमा छन् र अरु सबै घाटामा छन् ।
यस्तो अवस्थामा कसैले एक अर्को एफएम स्टेसन खोल्ने योजना बनायो भने व्यवसायीकरुपमा त्यो सही निर्णय होला त ?
कदापी हुँदैन ।
तर, यहाँ निड र ग्यापको शुत्र लगाउन सक्नुपर्छ । यति धेरै एफएम स्टेसन भएको सहरमा रेडियो सुन्ने स्रोता पनि धेरै छन् । त्यसैले यी एफएम स्टेसनमा के आवश्यकता र ग्याप छ भनेर अध्ययन गर्ने हो भने पक्कै पनि केही भेटिन सक्छ ।
आचार्यले एउटा ‘ग्याप’ पत्ता लगाएका छन् । त्यो हो नारी एफएम ।
तीन दर्जन एफएममध्ये कुनै पनि महिला लक्षित सेवा दिएका छैनन् । यहाँनेर एफएम खोल्न अत्यन्तै रुचि भएको व्यक्तिले नारी एफएम खोल्न सक्छ । जहाँ सबै कन्टेन नारीका लागि बन्नेछन्, उद्घोषण गर्नेदेखि आरजे सबै नारी नै हुनेछन् र विज्ञापन पनि नारीकै भ्वाइसमा बजाइने छ ।
पुरुषको आवाजमा गीतमात्र बज्नेछन् । जुन नारीलाई मन पर्छ । यस किसिमको एफएम खोल्यो भने चल्ला कि नचल्ला ?
पक्कै चल्छ ।
किन भने त्यहाँ निड र क्याप छ ।
त्यसैले जहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा र सप्लाइ पनि भइरहेको छ भने पनि त्यहाँ उपभोक्तालाई आवश्यकता र केही ग्याप भइरहको हुनसक्छ । त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ ।
रुचि कहाँ छ ?
जसले स्टार्टअप गर्छु र उद्यमशिल बन्छु भन्ने सोच बनाइरहेको छ भने उसले आफ्नो रुचि कहाँ छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
‘मलाई के कुरामा रुचि छ ? भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ,’ आचार्यले भने, ‘आफ्नो रुचिअनुसारको स्टार्टअप गर्नुपर्छ ।’
त्यसैले सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कि वस्तु उत्पादन गर्ने स्टार्टअप गर्ने भन्ने निर्धारण यही रुचिमा भरपर्छ । यदि आफ्नो रुचिको क्षेत्र छैन भने स्कोप छ भन्दैमा त्यो स्टार्टअप सफल नहुन पनि सक्छ ।
समयअनुसारको आवश्यकता र ग्याप थाहा भयो । त्यसबाट आफ्नो रुचिअनुसारको आइडिया आएपछि स्टार्टअपका लागि पहलो चरण शुरु भएको मान्नु पर्छ ।
‘स्टार्टअपको पहिलो चरण भनेको आइडिएसन हो,’ आचार्यले भने, ‘जहाँ आइडियालाई व्यापारको रुपमा कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर छलफल शुरु हुन्छ ।’
यसका लागि व्यक्तिहरुलाई भेट्ने, आइडिया सुनाउने, बजार बुझ्ने काम हुन्छ । यी कामले आइडियालाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्छ ।
आइडिएसनको चरण पार गरेपछि कन्सेप्टको काम शुरु हुन्छ । यसलाई ‘कन्सेप्टचुअलाइजेसन’ भनिन्छ ।
आइडिया के हो ?, त्यसको कन्सेप्ट के हो ?, त्यो कसरी आउँछ ? कसरी बजारसम्म पुग्छ ? उपभोक्ताले के प्राप्त गर्छन् ? यी सबै प्रश्नलाई कन्सेप्टका रुपमा व्यवसायीक योजना बनाउनु पर्छ ।
यो कन्सेप्ट तयार हुँदासम्म एक वा दुई जनामात्र संलग्न भएका हुन्छन् । आइडिया ल्याएर कन्सेप्ट बनाएपछि बल्ल टीम बन्छ ।
टीम र टीम कमिट्मेन्ट
स्टार्टअप आइडिया कन्सेप्टचुअलाइजेसन भएपछि त्यसलाई एक्लै अगाडि बढाउन सकिन्न् । त्यसका लागि टीम बनाउनुपर्छ । उक्त कन्सेप्टमा काम गर्न रुचि भएका, काम गर्न सक्ने सक्षम मिल्ने साथी खोजेर टीम बनाउन सकिन्छ ।
टीम बनिसकेपछिको अर्को काम भनेको कमिटमेन्ट हो । टीम बनेर मात्र टीमका सबै सदस्य उत्तिकै कमिटमेन्ट छन् कि छैनन् भनेर कमिटमेन्ट लिन जरुरी छ । सबै जनाको उत्तिकै कमिटमेन्ट आवश्यक छ । यसलाई हामी कमिटमेन्ट फेज भनिन्छ ।
यहाँनेर आइपुग्दा आइडिया व्यवसायको रुपमा परिणात भइसकेको हुन्छ ।
रजिष्ट्रेसन वा भ्यालिडेसन
अब स्टार्टअपको कन्सेप्ट व्यवसायका रुपमा रजिष्ट्रेसन गर्न सकिन्छ वा त्यसभन्दा पहिला भ्यालिडेसन पनि गर्न सकिन्छ ।
भ्यालिडेसन भनेको स्टार्टअपको वस्तु वा सेवालाई सानो परीमाणमा उत्पादन गरेर परीक्षण गर्ने । यस प्रक्रियामा वस्तु कस्तो छ भनेर केही समूहबाट प्रतिक्रिया लिइन्छ । उपभोक्ताले चाहेको जस्तो बन्यो कि भनेन भनेर भ्यालिडेसन गर्ने काम हुन्छ ।
भ्यालिडेसनबाट धेरै सुझाव प्राप्त हुन्छ । त्यही सुझावका आधारमा वस्तुको परिमार्जन र फाइनल गर्न सकिन्छ ।
स्केलिङ र लगानी
बजारबाट आफ्नो वस्तुको भ्यालिडेसन गरेपछि त्यसलाई ‘स्केलिङ’ गर्ने चरण शुरु हुन्छ । यसको अर्थ हो उत्पादन वृद्धि गर्ने ।
उत्पादन बढाएर वस्तु उत्पादन गर्नको लागि अझ ठूलो लगानीको आवश्यक छ । लगानी आफैले गर्न सकिदैन भने बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । अर्थात् पार्टनरका रुपमा लगानीकर्ता खोज्नु पर्छ । यसरी लगानी ल्याउपछि व्यवसाय बिस्तार हुँदै एक स्तरमा पुग्छ ।
उत्पादन शुरु गरिसकेपछिको अन्तिम चरणको काम भनेको स्टाब्लिस्मेन्ट हो । अर्थात् व्यवसायलाई स्थापित गराउने काम । यहाँबाट व्यवसायको प्रगति उच्चग्राफमा दौडिन थाल्छ । त्यसपछि स्टार्टअपले आयआर्जनदेखि ख्याति प्राप्त गर्न थाल्छ ।
किन हुन्छन् स्टार्टअप असफल ?
स्टार्टअप कति सफल र असफल भन्ने विषय धेरै चर्चा हुन्छ । कुनै पनि स्टार्टअप सफल र असफल हुनुमा बजारको आवश्यकतादेखि माथि भनिएका विभिन्न चरणमा कति काम गरेको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने आचार्यको भनाइ छ ।
सबैभन्दा पहिला बजारको माग कति छ त्यो पहिचान गर्नसक्नु छ । मागअनुसार सप्लाइ गर्न कति लगानी गर्ने र प्रतिफल कति समयमा कतिसम्म आउँछ भनेर मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ ।
‘यसमा अलिकति रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट (आरएण्डडी)मा काम गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘यसैका आधारमा ब्रेकइभनमा कहिले जान सकिन्छ र त्यो बेलासम्म कति लगानी चाहिन्छ भनेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा पनि सफल र असफल स्टार्टअपका उदाहरण धेरै छन् । नेपालमा सबैभन्दा सफल स्टार्टअप भनेको फुडमाण्डू हो भन्छन् आचार्य । डेलिभरीको रकम नै नाफा हो भनेर शुरु गरेको कम्पनीले अहिले रेष्टुराँलाई लिष्टिङ गर्न पनि पैसा लिन्छ ।
शुरुमा डेलिभरी चार्जबाट मात्र नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको फुडमाण्डूले अहिले लिष्टिङमा परेका रेष्टुराँबाट व्यापारको १५ देखि २० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ । उसले बजारमा राम्रोसँग आँकलन गरेर आफूलाई परिवर्तन गर्दै स्थापित हुन सफल भएको छ ।
यस्तै सफल भएको अरु स्टार्टअप पनि छन् । जस्तो कि ई-सेवा, खल्ती, पठाओ, युजी केक, कारखाना पनि स्टार्टअपबाट शुरु भएर सफल भएका व्यवसाय हुन् ।
त्यस्तै, असफल भएका स्टार्टअप पनि छन् ।
‘मेरो आफ्नै केस छ । एफवान सफ्टसँग मिलेर ‘क्यास अन एड’ शुरु गरेका थियौं,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर, त्यो असफल भयो ।’
आइडिया राम्रो हुँदाहुँदै पनि समयभन्दा पहिला आएका कारण ‘क्यास अन एड’ असफल भएको उनको भनाइ छ । कुनै पनि आइडिया समयभन्दा पहिला वा समयभन्दा पछि आयो भने नचल्ने उनी बताउँछन् ।
‘स्टार्टअप सफल र असफल हुुनमा सबैभन्दा ठूलो दुई चूनौती छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘एउटा हो मिडियाले आन्टरप्रेनियरलाई हिरोप्रेनियर बनाउनु ।’
उनको अर्थ के हो भने मिडियाले स्टार्टअपलाई समयभन्दा पहिला नै हिरो बनाइदिन्छन् । त्यसले गर्दा उसलाई शुरुवात कै चरणमा सफलता प्राप्त गरेको महसुस गर्छ । यस भावले उसको प्रगतिमा बाधा पुग्छ । प्रगति सुस्ताउँछ वा रोकिन्छ ।
‘क्यास अन एड पनि यसैभित्र परेको एक उदाहरण हो,’ आचार्यले भने ।
अर्को ठूलो चूनौती भनेको इन्ट्री र एक्जिटमा ज्ञान नहुनु । स्टार्टअप गर्नेले ठूलो सपना देखेको हुन्छ । सपना देख्दै गर्दा आँखा कहिले खोल्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । यसको अर्थ हो कुनै बेला उसलाई एक्जिटको अफर आउन सक्छ ।
‘अफर राम्रो छ भने एक्जिट हुनु पनि जान्नु पर्छ,’ आचार्यले भने ।
त्यस्तै, पार्टनरसिप लिएर राम्रो हुन्छ कि नलिइकन राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । कुनै बेला पार्टनरसिप नलिइकन राम्रो हुन्छ वा काममा अत्यन्तै आवश्यक भएको पार्टनरसिप लिएर सफल हुनसक्नु मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेको इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा, बोनस कति ?
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १५.७९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार बसेको